ရာခိုင်နှုန်း Letrozole အမှုန့် --- ငါသိရှိရမည်ငါးခုသောအရာတို့ကို !!! | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/Letrozole/PCT Letrozole ကုန်ကြမ်းအမှုန့် - ကျွန်ုပ်သိသင့်သောအချက်ငါးချက် !!!
အပေါ် Posted 11 / 05 / 2017 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် Letrozole.
Q1: Is Letrozole ကုန်ကြမ်းအမှုန့် တစ်ဦး Steroid တစ်မျိုး?
A1: Letrozole ကုန်ကြမ်းအမှုန့်, Letrozole များ၏ကုန်ကြမ်း steroids အမှုန့်, Hormore တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, မ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်, ရာခိုင်နှုန်းစီးရီးပိုင်, အခြားသူများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ ဆေး Tamoxifen,Clomid,Aromasin,
Halotestin, Anastrozole, ဒီနေရာမှာအခြေခံသတင်းအချက်အလက်နေသောခေါင်းစဉ်:
အရည်ပျော်မှတ် - ၁၈၁-၁၈၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ အရောင် - အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဖြူဖင့်ဖြူဖွေးသောအမှုန့်များ၊ များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အခန်းအပူချိန်တွင်သိုလှောင်ထားသည့် Letrozole ကိုဝယ်သည်။ အခြားပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမြင့်မားသော၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊ ယခင်ကအွန်လိုင်းမှ ၀ ယ်ယူခဲ့သူ ၁၀ ဂရမ်အမှုန့်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆေးများ / ဆေးပြားများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Q2: ရုံ Anti-ရင်သားကင်ဆာအတွက်အသုံးပြု Letrozole အမှုန့်လား?
A2:Letrozole အမှုန့်ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သည်အမျိုးသမီးများအကြားတွင်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုတားဆီးနိုင်သည့်ဆေးဝါးအဖြစ်လူသိများသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုတွင် Letrozole တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုလှုံ့ဆော်ရန်အတွက်အစွမ်းထက်ဆုံးဆေးဖြစ်သည်။ မြှင့်တင်ရေး အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို။ ဒါဟာအစ LDL ၏အဆင့်ဆင့် (မကောင်းတဲ့) လက်စထရောကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် Non-ပိတ်ဆို့ခြင်း azoospermia ခံစားနေရပြီးအထီးလူနာ spermatogenesis များ၏အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သည်နှင့် endometriosis ဆက်ဆံပါ။ တတိယမျိုးဆက်ရွေးချယ်ပါးစပ် aromatase inhibitor, Letrozole အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းကြီးထွားဟော်မုန်း, cortisol, SHBG, binding ပရိုတိန်း၏ Hepatic ထုတ်လုပ်မှု, HDL နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌သိသိသာသာတိုးမြှင့်မှုများကိုနှိုးဆွရန်အသုံးပြုသည်။ သောသူအပေါင်းတို့သည်မကြီးဘူးဆိုရင်, Femara ကိုလည်းလျှော့ချသို့မဟုတ်ပင်ထိုကဲ့သို့သောအဆီပြန်အသားအရေ, gynecomastia နှင့်အရည် retention ကိုအဖြစ်အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖျက်သိမ်းရေးစဉ်ကျန်းမာကိုယ်ခံစွမ်းအား function ကိုကျန်းမာလက်စထရောအဆင့်ပူးတွဲကျန်းမာရေး, သိမြင် function ကိုများနှင့်ကြွက်သားကြီးထွားမြှင့်တင်ရန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်
Q3: AI အအဖြစ်အကောင်းတစ်ဦး chioce အသုံးပြုသော Letrozole အမှုန့်လား?
A3: တစ်ခု aromatase inhibitor ရွေးချယ်တဲ့အခါစွမ်းဆောင်ရည်များအများစုအားကစားသမားတိုးမြှင့်သည်သုံးဘုံရွေးချယ်မှုပုံမှန်အားဖြင့်ရှိပါတယ်; Arimidex, Aromasin နှင့် Letrozole နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအရေးယူအတွက်အလွန်ဆင်တူသည်။ တစ်ဦး aromatase inhibitor ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဓိကအားနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သူ့ဟာသူအတွင်းတည်ရှိသည်; အဆိုပါ aromatase အင်ဇိုင်းတားစီးဖို့။ အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုသူအဘို့ဤအများအပြားအဖြစ်အကြီးအအရေးပါမှုသည် ဟိုအန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက် ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်အီစထိုဂျင်မှ converting အားဖြင့် aromatize ပါလိမ့်မယ်။ အီစရိုဂျင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် buildup အရှင် Letrozole အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖို့ထိခိုက်မှုလျှော့ချရန်, အီစရိုဂျင်အဆင့်တားစီးအလုပ်လုပ်တယ်, များစွာသောမလိုချင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
Q4: ကိုယ်ဘယ်လောက် letrozole ယူသလဲ?
A4: အသုံးပြုသူတစ် ဦး အသုံးပြုလိုသည့် Letrozole အများဆုံးပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် 2.5mgs ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုများစွာအရလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ခန်ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအီစရိုဂျင်အားလုံးနီးပါးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ကြောင်းလေ့လာမှုများစွာကပြသခဲ့သည်။ ဒီထက်မြင့်မားတဲ့မည်သည့်ဆေးကိုမျှမလိုအပ်ဘဲရလိမ့်မည်။ Lutenizing ဟော်မုန်းများ၊ follicles ကိုလှုံ့ဆော်သောဟော်မုန်းနှင့်လိင်ဟော်မုန်းကိုသုံးစွဲသူများတွင် globulin ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း Letrozole သည်သံသရာလွန်ကာလကုထုံးအတွင်းအသုံးပြုပါကအကျိုးဆက်များဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဒြပ်ပေါင်း၏အသုံးပြုမှုကာလအတွင်းအက်စထရိုဂျင်ပမာဏကိုနည်းစေနိုင်သောစွမ်းရည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒြပ်ပေါင်းများကိုရပ်စဲလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အီစရိုဂျင်အဆင့်များသည်မြင့်တက်လာသဖြင့်သံန္နိဌာန်လွန်ကုထုံးစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်ပြီးနောက်၎င်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
Q5: overdosed လျှင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲနိုငျသလဲ
A5: ကအကြောင်းကိုသံသယရှိစရာမလိုပါဖြစ်ပါသည်, အီစရိုဂျင်အဆင့်တစ်ကောင်ထွက်ခြောက်သွေ့အတွက်ကူညီမည်ဖြစ်ပြီးသိပ်ဖိနှိပ်မှုပြဿနာတစ်ခုဆီသို့ဦးတည်နိုင်ခဲ့လျော့နည်းသွားသည်။
ဒါ့အပြင် Letrozole ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏အလွန်အကျွံသုံးစွဲလိင်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, ပူးတွဲနာကျင်မှု, ဒါမှမဟုတ် Flat-ပေါ်ထွန်း musculature ၏ဆုံးရှုံးမှုဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သောအနိမ့် estradiol အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သော testosterone ဟော်မုန်းအဖြစ် aromatizable steroids အသုံးပြုနေစဉ် underdosed အကယ်. သို့မဟုတ် Dianabol, သညျ့မွငျ့မား estradiol ကိုလည်းလိင်စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ရေ retention ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး, gynecomastia စေသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်။
15247 Views စာ
Nandrolone decanoate ဆေးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုကဘာလဲ? ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက် PCT ဆေးဝါးများ - နော်ဗadex၊ Clomid၊ Letrozole, Aromasin, Halotestin